iPhone oku History Iweghachite - Olee otú naghachi oku Abanye na iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Olee otú Naghachi oku History na iPhone
1 Naghachi iPhone Files
Naghachi iPhone Ndi ana-akpo
Naghachi iPhone Photos
Naghachi iPhone Video
Naghachi iPhone Notes
Naghachi iPhone oku History
Naghachi iPhone kalenda
Naghachi iPhone oziolu
2 Weghachi iPhone
Naghachi iPhone mgbe Weghachi
Weghachi iPhone Ndi ana-akpo
Weghachi iPhone Photos
Weghachi iPhone enweghị iTunes
Weghachi iPhone mgbe Jailbreak
Weghachi iPhone si iTunes
Weghachi iPhone si ndabere
Weghachi iPhone si iPad ndabere
Weghachi kọntaktị site iTunes
iPhone Weghachi Nchọpụta nsogbu
3 undelete iPhone
Undelete iPhone Ozi
Undelete iPhone Photos
Undelete iPhone Video
Undelete iPhone ndabere
Undelete iPhone Text
Undelete iPhone Notes
Undelete iPhone Email
Undelete iPhone Files
Undelete iPhone égwu
4 iPhone Data Recovery Software
Tenorshare iPhone Data Recovery Software
Fonepaw iPhone Data Recovery Software
iSkysoft iPhone Data Recovery Software
Olee otú Naghachi oku History na iPhone (iPhone 6s Plus / 6s gụnyere)
Olee otú m nwere naghachi m iPhone oku log?
Site mmeghe m ehichapu a ọnụ ọgụgụ m mkpa nwere ngwa ngwa na emeghị m kwado ya, ohere ọ bụla m nwere ike iweghachi ihe oku log na m iPhone (iOS 9)?
Atụla kwa nchegbu mgbe izute nke a. E nwere ụzọ atọ na i nwere ike iji na-agbake iPhone oku akụkọ ihe mere: kpọmkwem iṅomi gị iPhone, wepụ si gị iTunes nkwado ndabere na mpaghara naputa site na iCloud ndabere. Ndị a ụzọ atọ ka ị naghachi oku azaghị, oku mbata na oku oku. Ihe niile ị chọrọ ime bụ na-enweta ihe iPhone oku akụkọ ihe mere mgbake ngwá ọrụ nke nwere ike inyere gị aka ịchọta oku na-apụ. Wondeshare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) dị otú ahụ a ngwá ọrụ.
iPhone oku History Iweghachite Software
3 Ụzọ n'ihi na ị na-agbake ehichapụ oku log si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Naghachi ehichapụ iPhone oku log gụnyere abata, na oku na-efu oku.
Weghachite iPhone oku akụkọ ihe mere kpọmkwem site iPhone, iTunes nkwado ndabere na mpaghara iCloud ndabere.
Preview nkọwa dị ka nọmba ekwentị, aha, oku na-aga ụbọchị, oge, wdg
Ọ dịghị data mmebi, mgbanwe, ehi ehi na n'ihe ize ndụ-free.
ndị ebudatara ya
1: Naghachi oku log si iPhone
2: Naghachi oku log si iTunes
3: Naghachi oku log si iCloud
Nkebi nke 1: Kpọmkwem Naghachi oku History si iPhone (iOS 9)
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị iPhone na ike iṅomi ya
N'ụzọ dị otú a, i kwesịrị nwere gị iPhone na aka na-enweta ya ejikọrọ na kọmputa na mbụ. Mgbe ahụ na-agba ọsọ usoro ihe omume na-anọ na mgbake mode nke "naputa site na iOS Devices". Mgbe ị na-ahụ window gosiri na n'akụkụ aka nri, ị nwere ike ozugbo pịa na "Malite iṅomi" button na-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone maka furu efu oku akụkọ ihe mere.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị jikọọ iPhone 4, iPhone 3GS ma ọ bụ iPhone 3G, ị nwekwara ike ga-esi n'ime "Advanced mode" iji nweta a miri iṅomi. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga na-edu gị iṅomi gị iPhone.
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake ehichapụ oku akụkọ ihe mere si iPhone
Ozugbo omume okokụre ịgụ isiokwu gị iPhone, ọ ga na-ewetara gị a Doppler N'ihi egosi recoverable data na gị iPhone, ọ bụghị nanị oku na ndekọ, kamakwa kọntaktị, ozi, photos, videos na na. Ma ị nwere nhọrọ ka ịhụchalụ na ekpebi nke ihe ị chọrọ iji naghachi. Mgbe ahụ nne Mmetụta ha na pịa na "Naghachi" button na-azọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Part 2: Naghachi iPhone oku History si iTunes ndabere
Niile ma ọ bụ ihe ọ bụla, nke ahụ bụ ihe iTunes ndabere na-ahapụ anyị na-eme. Ị na-enwe ohere iji weghachi na ihe niile dị iTunes ndabere faịlụ gị iPhone, ma ọ bụ ị weghachi ihe ọ bụla. E nweghị selectively Iweghachi. Gịnị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ selectively weghachi ụfọdụ data si ndabere? The usoro n'okpuru na-aga na-mara mma bara uru.
Nzọụkwụ 1 Họrọ ma wepụ iTunes ndabere faịlụ
Ị adịghị mkpa jikọọ gị iPhone na kọmputa mgbe ị na-ahọrọ otú a, na adịghị eme ya, n'ihi na iTunes ndabere nwere ike mfe emelitere ọ bụrụ na ị nyeere akpaka mmekọrịta.
Nanị ẹkedori usoro ihe omume na kọmputa gị na-ahọrọ mode nke "naputa site na iTunes ndabere faịlụ". Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na ihe niile ndabere faịlụ site iTunes na kọmputa gị na-adade ke ndepụta site usoro ihe omume na-akpaghị aka. Ihe niile ị chọrọ ime bụ họrọ otu maka gị iPhone ọ bụ onye na ị chọrọ wepụ, na pịa na "Malite iṅomi" button iji nweta ya amịpụtara. a
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake iPhone oku log si iTunes ndabere
Usoro ihe omume nwere ike inwe nkwado ndabere na mpaghara amịpụtara na sekọnd ole na ole. Ozugbo ọ mere, ị nwere ike ihuchalu niile ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara na nkọwa. Ahọrọ "oku History" menu na n'aka ekpe. I nwere ike ịgụ na ekwentị gị oku akụkọ ihe mere otu otu. Tinye akà rà na ihe ị chọrọ ịnọgide na-azọpụta ya na kọmputa gị site na ịpị "Naghachi" button.
Nkebi nke 3: Weghachi iPhone oku History si iCloud ndabere
Dị nnọọ ka iTunes, iCloud adịghị ekwe ka ị ihuchalu ma ọ bụ nhọrọ weghachi kpọmkwem data site na ya ndabere. Ihe niile ị chọrọ ime na-eji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ na-pụrụ inyere gị aka wepụ ndabere maka nhọrọ mgbake na weghachi. E nwekwara dị otú ahụ.
Nzọụkwụ 1 Gbaa ndị omume na banye na gị iCloud
Họrọ iji otú a, mkpa ka ị mara gị iCloud na akaụntụ, na nke ahụ bụ ikwu Apple ID na paswọọdụ, nke mere na ị nwere ike nweta ihe online iCloud ndabere ala.
Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume, ịgbanwee gaa na mode nke "naputa site na iCloud ndabere faịlụ". Mgbe ahụ ị pụrụ ozugbo banye na gị iCloud akaụntụ site n'itinye na Apple ID na paswọọdụ. Ọ bụ kpam kpam mma ebe a. Wondershare Ghara ịnọgide na-ma ọ bụ ihihi ozi ọ bụla nke akaụntụ gị na data.
Nzọụkwụ 2 Download na ike iṅomi ndị iCloud ndabere
Mgbe na ị nwetara na, usoro ihe omume nwere ike ịchọpụta niile ndabere faịlụ ẹdude gị iCloud akaụntụ. Ị nwere ike ịhọrọ onye maka gị iPhone na pịa na "Download" bọtịnụ iji nweta ya ala gị na kọmputa. Nbudata usoro ga-ewe gị a nkeji ole na ole. Nweta onwe gị a iko kọfị na-eche maka a oge.
Rịba ama: The ebudatara faịlụ bụ naanị emi odude na kọmputa gị. E nweghị ihe ndekọ na mmemme ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ọzọ.
Nzọụkwụ 3 Preview na-agbake oku log n'ihi na gị iPhone
Mgbe nbudata, na a ga-Doppler button pụtara. Pịa ya ime na. Mgbe iṅomi dị n'elu, ị nwere ike ihuchalu ọdịnaya nke ndabere faịlụ na zuru ezu. Ahọrọ "oku History", na i nwere ike ịgụ ihe niile otu otu. Tinye akà rà na ihe ị chọrọ iji naghachi na-azọpụta ya na kọmputa gị.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS - 3 Ụzọ naghachi Your Echefuola iPhone Data
Naghachi iPhone data site ịgụ isiokwu gị iPhone, adịrị iTunes na iCloud ndabere faịlụ.
Preview na selectively naghachi ihe ị chọrọ site na iPhone, iTunes na iCloud ndabere.
Idozi iOS nkịtị enweghị adịkwa data dị ka mgbake mode, bricked iPhone, na-acha ọcha na ihuenyo, wdg
Ofụri Esịt dakọtara na iOS 9, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Pro, na ndị ọzọ nile iOS ngwaọrụ ụdị
Naghachi Data si iOS Devices
Wepụ iTunes ndabere Content
Wepụ iCloud ndabere Content
Idozi iOS ka nkịtị ọnọdụ
Naghachi ozi ederede site na iPhone
iOS 9 Ngwaọrụ Data Recovery
Olee otú ịchọta Lost iPhone Ndi ana-akpo
Olee otú mbupụ SMS si iPhone
iOS 9 Data Recovery: Olee otú iji weghachite Lost Data si iOS 9 Devices
Otú e si etinye Music na iPhone si ọzọ Computer
iPhone Ringtone Onye kere: Mee iPhone Ringtone (iPhone 5 gụnyere)
Top 10 iPhone Security égwu Chebe Your iPhone
Olee otú Dochie iPhone 4 / 5S / 5 / 4S / 3GS / 3G Earpiece Ọkà Okwu
Nkuzi maka otú ndozi a gbawara iPhone 5 / 5s / 5c ihuenyo
Olee otú Zọpụta MMS Files na iPhone ka a Computer
Olee otú Naghachi iPhone Data Lost mgbe Iweghachi ka Factory Ntọala
Olee otú Naghachi iMessages si iPhone
Ụzọ dị mfe iji Bugharịa Photo ka Album on iPhone
> Resource> iPhone> Olee naghachi oku History na iPhone